उपवासको वैज्ञानिक तथा सामाजिक महत्व, साउनमा ब्रत किन र कसरी बस्ने ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ०६, २०७६ समय: ११:३०:१६
इटहरी / साउन महिना सुरु भएको छ । साउन महिनामा धार्मिक अनुष्ठान, पुजाआजा तथा व्रत बस्ने गरिन्छ । यो आडम्बर वा अन्धविश्वास होइन । साउन महिनामा सात्विक भोजन गर्नु, उपवास बस्नु, धार्मिक कर्ममा संलग्न हुनुको सामाजिक तथा वैज्ञानिक महत्व पनि छ ।
१. उपवास एवं ब्रत बस्नुअघि मानसिक तथा शारीरिक रुपमा तयार हुनुपर्छ । उपवास बसेको बेला धेरै शारीरिक श्रम गर्नु उचित हुँदैन ।
मनलाई शान्त राख्नुपर्छ । प्रशन्न हुनुपर्छ ।